LegalZoom na-emejuputa ọgụgụ isi na iji Veritone One | Martech Zone
N'ime uwa nke ngwa ngwa nke mgbasa ozi ntaneti, ugha di nma kwesiri ka o buru okwu banyere ndu na onwu. Mana, a bịa na mgbasa ozi mgbasa ozi, ijikwa ihe niile ndị mmadụ na-ekwu gbasara ika nwere ike iche na-agaghị ekwe omume. FCC edeputara karia 32,000 telivishọn na ụlọ ọrụ redio na-agbasa kwa ụbọchị. na-ahapu ndi okacha amara na ahia ahia na-agbali iji nyochaa ma no n'ihu nha ROI maka ndi mgbasa ozi na ndi nwere oke.
Obi dị m ụtọ, Amamịghe echiche enweela ike ịmịnye, mepee ma nyochaa ọdịnaya dị n'usoro, site na redio mpaghara gaa na nwa afọ kwuru na TV dị ndụ - na-enye ụdị ikike ịkọwapụta echiche ndị na-adịghị mma na nke ziri ezi site na mkpụrụokwu ọchụchọ a na-enyocha, na-achọpụta mkpesa ngwa ngwa ma na-egosipụta ekele. Igwe ihe nyocha nwere ike ịchọpụta olu, aha, logos na ihe, na -emepụta ọdụ data maka azụmaahịa iji wepụta naanị ihe dị mkpa, na-enweghị oge na-echegharị elekere na elekere elekere.
Veritone Otu bụ enyemaka nke Veritone, Inc. na ụlọ ọrụ mgbasa ozi zuru oke na -emepụta mgbasa ozi nke obodo na nke ọdịnala maka ụdị ndị a ma ama. Veritone kwupụtara mgbasawanye nke ọrụ na IwuZoom, onye na - eweta ihe ngwọta iwu maka obere azụmaahịa na ezinụlọ, site na ọrụ izizi ya na-anwale mkpọsa mpaghara, iji wepụta mgbasa ozi mba, mpaghara na pọdkastị zuru oke.
Veritone Otu na-emepe mgbasa ozi mgbasa ozi nke ọdịnala na nke ọdịnala na nka na ịzụ ahịa mgbasa ozi, atụmatụ, mmepe okike yana ntinye aka na mmekọrịta kacha mma na ọkwa kachasị elu, ndị ọbịa na-agbasa ozi mba. Site na mmekorita, LegalZoom na Veritone One ewuwo mkpọsa siri ike nke welitere nkwalite ahịa nke LegalZoom site na iji pọdkastị na nnabata ndị ọbịa.
Veritone Otu na-enye ikike ịnwe ikike Amamịghe echiche (AI) teknụzụ, Veritone Platform, iji nye LegalZoom nghọta na izi ezi nke nyocha ad na nso ezigbo oge, yana nsonye asọmpi.
The Veritone Platform na-etinye ọtụtụ puku awa nke ọdịyo na vidiyo kwa ụbọchị, na-agbakwunye ụlọ ya dị ike nke injinia akpakọtara ọnụ, gụnyere nchọpụta logo, nhazi asụsụ okike, mkpịsị aka mkpịsị aka, nchọpụta ihu na nchọpụta ihe, na -emepụta nchekwa data bara ụba na arụmọrụ. Ihe ikpo okwu a n’enye ihe omuma nke amaghi n’oge gara aga ya na ichota na nchoputa di ike nke n’aga n’iru iji kwalite mmefu na oru ndi n’adighi nma na nke ndi ahia.
Veritone na-enye usoro ihe eji igwe ojii dị n'otu maka ndị ọkachamara mgbasa ozi ijide, ndeksi, chọọ, ma gbasaa mgbasa ozi na ọdịnaya dijitalụ. Emebere ikpo okwu a ka o wee nyere nzukọ ahụ dum ike yana ọgụgụ isi dị adị n'ezie, site na ahịa na mmemme gaa nchịkwa.
LegalZoom na-enwe obi ụtọ ịbụ onye ahịa mbụ nke Veritone Otu ihe karịrị afọ 15 gara aga, anyị gara n'ihu na-eto mmekọrịta a n'ihi ogo ọrụ na ihe ọhụrụ ha nwere ike inye na Veritone Platform. Usoro okike, idetuo na ọdịnaya ha mepụtara maka mkpọsa anyị yana mmekọrịta ha megoro site na ndị na-akwado nkwado na-eme ka anyị mata na anyị na-ada ụda mgbe niile n'ofe ndị na-ajụ ase na ndị na-ege ntị. John Suh, onye isi ndị isi nke LegalZoom
Ọ dị mkpa iji tụọ ROI site na nsuso na ndekọ ndekọ aha na-ekwu n'ihi dollar ndị emefuru, na ịnwapụta na mgbasa ozi ahụ niile bụ nke mbụ. Nkwenye mgbasa ozi, ma ọ bụ "nyocha ikuku" ejirila aka rụọ ọtụtụ awa ruo ọtụtụ afọ; ọ nwere ike ịbụ naanị otu onye ọrụ ma ọ bụ karịa ka ọ rụọ ọrụ nyocha ikuku na nyochaa okporo ụzọ ma ọ bụ nzaghachi na mgbasa ozi mgbasa ozi maka ụdị ndị isi. Ọzọkwa, nnukwu ọrụ dị otú ahụ nke metụtara ọtụtụ awa ịgbasa ozi na telivishọn na redio pụrụ ịkpata ihie ụzọ ụmụ mmadụ.
Kama nke ahụ, iji ọtụtụ akụrụngwa akụrụngwa na otu ikpo okwu iji nyochaa ma gosipụta data na ezigbo oge ọ bụghị naanị na-ewepụta oge maka onye ọrụ iji usoro imepụta ihe karịa, ọ nwekwara ike ịchekwa ego.
Rụ ọrụ na LegalZoom abụrụla ezigbo mmekọrịta. Ihe bidoro site na ịnwale redio mpaghara abụrụla ohere ịkekọrịta ozi ha dị mkpa ma dịkwa mkpa na enyemaka gbasara iwu kwesịrị ịdị maka mmadụ niile. Nraranye nke otu anyị na ihe okike, jikọtara ya na ike Veritone Platform na-enye ntọala zuru oke ka anyị na-elekọta mkpọsa mba na mpaghara ọhụụ. Ryan Steelberg, onye isi oche nke Veritone One
Dika oge mgbasa ozi na-esiwanyewanye dijitalụ, ndị ọkachamara n'ahịa na ndị na-ere ahịa kwesịrị ịnabata teknụzụ ọhụrụ, dịka AI nyiwe igwe nyocha, iji nọgide na-asọmpi. N'ihi na data na-ewuli elu kwa ụbọchị, oge awa ahụ ga-abawanye, na-eme ka ndị ọrụ nwee nsogbu ma na-ebelata oge mmeghachi omume dị egwu maka ụdị ndị bi na ozugbo omenala nke nzaghachi. Gbasa ozi nke na-ebelata ọrụ dị egwu na-emepe ụbụrụ ihe okike iji lekwasị anya na ebumnuche azụmaahịa buru ibu, ma na-abawanye iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa yana n'ikpeazụ, ego ha nwetara.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Veritone One, gaa na VeritoneOne.com. Iji mụtakwuo banyere ọganihu dị na teknụzụ na-eme ka ọgụgụ isi dị n'ime ọgụgụ isi, gaa Veritone.com.
Tags: njikwa adaiAmamịghe echichena teknụzụJohn NwokelegalzoomRyan Steelbergveritone